Ny praiminisitra kanadianina dia namoaka fanambarana momba ny fianjeran'ny fiaramanidina Iran mahafaty
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny praiminisitra kanadianina dia namoaka fanambarana momba ny fianjeran'ny fiaramanidina Iran mahafaty
KanadaNy praiminisitra Justin Trudeau dia namoaka izao fanambarana manaraka izao momba ireo olona maty fianjeran'ny fiaramanidina tany Iran:
“Androany maraina, hiaraka amin'ireo kanadiana manerana ny firenena aho izay tohina sy malahelo mahita ny tatitra fa nisy fianjerana fiaramanidina iray tany ivelan'i Tehran, Iran, namono olona 176, anisan'izany ny 63 Kanadiana.
“Amin'ny anaran'ny Governemantan'i Kanada, izahay sy i Sophie dia manome fiononana feno ho an'ireo namoy havana, namana ary olon-tiana amin'ity loza ity. Hanohy hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena ny governemantantsika mba hiantohana fa hadihadiana lalina ity fianjerana ity ary hamaly ny fanontanian'ireo Kanadiana. Androany, manome toky ny Kanadiana rehetra aho fa ny fiarovana azy ireo sy ny fiarovana azy ireo no laharam-pahamehana indrindra. Miaraka amin'ireo firenena hafa misaona ny fahafatesan'ny olom-pirenena ihany koa izahay.
“Ny minisitra Champagne dia nifandray tamin'ny governemantan'i Okraina, ary miresaka amin'ny manampahefana mifandraika amin'izany sy amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena. Ny minisitra Garneau koa dia miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Transport Canada, ary manantona ireo namany iraisampirenena.
“Ireo namana sy havana misy olom-pirenena kanadiana inoana fa ao anaty sambo dia afaka mifandray amin'ny Global Emergency Canada 24/7 Emergency Watch and Response Center amin'ny alàlan'ny fiantsoana 613-996-8885 na 1-800-387-3124. Ny olom-pirenena kanadiana ao Iran izay mangataka fanampiana amin'ny kaonsily dia tokony hifandray amin'ny Ambasady Kanadiana ao Ankara na hiantso ny Global Emergency Canada's Emergency Watch and Response Center.
Nilaza ny minisitra Bartlett fa ny minisiterany dia manolo-tena hampitombo ny entana eo an-toerana laniana amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny